ငယ်ဘဝကိုပြန်သတိရစေမယ့် “မိုနိုပိုလီ ZingPlay” ဂိမ်း – DigitalTimes.com.mm
76 Shares 174 Views
ငယ်ဘဝကိုပြန်သတိရစေမယ့် “မိုနိုပိုလီ ZingPlay” ဂိမ်း
ဒီတစ်ပတ် TGIF အတွက်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ “မိုနိုပိုလီ ZingPlay” ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးနေရင်း ကြော်ငြာတွေတက်တက်လာတာတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ မိုနိုပိုလီဆိုတာကတော့ ကိုယ်တွေငယ်ဘဝတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီး မိုနိုပိုလီကဒ်ပြားပေါ်မှာ ဆော့ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ပျော်စရာဂိမ်းလေးတစ်ခုပါ။
Miracle Dice ဆိုတဲ့ဂိမ်းနဲ့တော့ တူတူပါပဲ။ မိုနိုပိုလီ ZingPlay ကတော့ မြန်မာတွေဆော့လို့လွယ်အောင် မြန်မာဗားရှင်းလို့ပြောရမှာပါ။ ဗျူဟာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေရင်းနှီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဝယ်ရောင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးကနာမည်ကြီးအထင်ကရနေရာတွေပတ်သွားရပါတယ်။ မိုနိုပိုလီဂိမ်းဖြစ်ပြီး အံစားတုံး၂တုံးကိုခေါက်ပြီး နေရာများစွာသွား ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အိမ်ဝယ်မလားမြေဝယ်မလား ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ဆော့လို့ရပါမယ်။
အံစာတုံးခေါက်လိုက်လို့ရပ်တဲ့နေရာ ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ နေရာကိုဝယ် ကိုယ်ပိုင်တိုက်တာတွေဆောက် အထင်ကရအမှတ်အသားတွေဆောက်ပြီး ကိုယ့်မြေကိုရောက်လာတာနဲ့ မြို့ဝင်ကြေးရမှာပါ။ ကိုယ်က ကိုယ့်မြေကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်လေလေ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့သူတွေ မြို့ဝင်ကြေးတွေများပြီး နောက်ဆုံးဒေဝါလီခံအောင် လုပ်ရမှာပါ။
နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုယူထားပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစတွေရှိပါတယ်။မိုနိုပိုလီကစားခုံပေါ်မှာ ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ထိ ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်။
အဓိက feature များ
– အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တခြားသောကစားသမားတွေနဲ့အတူ 3F (Fast –Fun-Free) မြန်ဆန် ပျော်ရွှင်ပြီး free ဆော့နိုင်မှာပါ။
– နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေရဲ့ 3D ကာတွန်းရုပ်တွေနဲ့ မြန်မာလိုအသံတွေထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ဆော့ရလွယ်မှာပါ။
– ကမ္ဘာ့အထင်ကရနေရာများစွာပါဝင်ပြီး အမျိုးအစားစုံတဲ့အံစာတုံးများကို ရွေးချယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာဂိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဆော့ရလည်းလွယ်တဲ့အပြင် Play Storeမှာလည်း rating5နီးပါးလောက်ရထားပါတယ်။ မြန်မာငွေကြေးနဲ့လည်း ဆော့ကစားလို့ရတဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကစားကြည့်လိုက်ရင်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းကကစားခဲ့ရတဲ့ဖီလင်ကိုပြန်ရမှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ အရင်ကလို ဆော့ဖို့လူမရမကစုစရာလည်းမလို တန်းကစားရုံပဲဆိုတော့ အခုပဲ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူရင်း အေးချမ်းတဲ့ စနေတနင်္ဂနွေလေးကို အနားယူနိုင်ကြပါစေ.
ဒီတဈပတျ TGIF အတှကျမိတျဆကျပေးလိုကျတာကတော့ “မိုနိုပိုလီ ZingPlay” ဆိုတဲ့ဂိမျးလေးပါ။ ဖစျေ့ဘှတျချသုံးနရေငျး ကွျောငွာတှတေကျတကျလာတာတှဖေူ့းကွမှာပါ။ မိုနိုပိုလီဆိုတာကတော့ ကိုယျတှငေယျဘဝတုနျးက သူငယျခငျြးတှစေုပေါငျးပွီး မိုနိုပိုလီကဒျပွားပျေါမှာ ဆော့ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ပြျောစရာဂိမျးလေးတဈခုပါ။
Miracle Dice ဆိုတဲ့ဂိမျးနဲ့တော့ တူတူပါပဲ။ မိုနိုပိုလီ ZingPlay ကတော့ မွနျမာတှဆေော့လို့လှယျအောငျ မွနျမာဗားရှငျးလို့ပွောရမှာပါ။ ဗြူဟာဂိမျးတဈခုဖွဈပွီး ငှရေငျးနှီး ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို ဝယျရောငျး တဈကမ်ဘာလုံးကနာမညျကွီးအထငျကရနရောတှပေတျသှားရပါတယျ။ မိုနိုပိုလီဂိမျးဖွဈပွီး အံစားတုံး၂တုံးကိုခေါကျပွီး နရောမြားစှာသှား ကိုယျကိုယျတိုငျ အိမျဝယျမလားမွဝေယျမလား ဆုံးဖွတျခကျြခပြွီး ဆော့လို့ရပါမယျ။
အံစာတုံးခေါကျလိုကျလို့ရပျတဲ့နရော ရောကျသှားတဲ့နရောမှာရှိတဲ့ နရောကိုဝယျ ကိုယျပိုငျတိုကျတာတှဆေောကျ အထငျကရအမှတျအသားတှဆေောကျပွီး ကိုယျ့မွကေိုရောကျလာတာနဲ့ မွို့ဝငျကွေးရမှာပါ။ ကိုယျက ကိုယျ့မွကေိုအဆငျ့မွှငျ့နိုငျလလေေ ကိုယျ့ဆီရောကျလာတဲ့သူတှေ မွို့ဝငျကွေးတှမြေားပွီး နောကျဆုံးဒဝေါလီခံအောငျ လုပျရမှာပါ။
နာမညျကွီးဆယျလီတှရေဲ့ဇာတျကောငျတှကေိုယူထားပွီး တဈယောကျခငျြးစီမှာ ကိုယျပျိုငျအစှမျးအစတှရှေိပါတယျ။မိုနိုပိုလီကစားခုံပျေါမှာ ဘီလြံနာတဈယောကျဖွဈအောငျထိ ဆော့ကစားလို့ရပါတယျ။
အဓိက feature မြား
– အှနျလိုငျးပျေါမှာ တခွားသောကစားသမားတှနေဲ့အတူ 3F (Fast –Fun-Free) မွနျဆနျ ပြျောရှငျပွီး free ဆော့နိုငျမှာပါ။
– နာမညျကွီးဆယျလီတှရေဲ့ 3D ကာတှနျးရုပျတှနေဲ့ မွနျမာလိုအသံတှထေညျ့သှငျးထားတဲ့အတှကျ ဆော့ရလှယျမှာပါ။
– ကမ်ဘာ့အထငျကရနရောမြားစှာပါဝငျပွီး အမြိုးအစားစုံတဲ့အံစာတုံးမြားကို ရှေးခယျြလို့ရနိုငျပါတယျ။
မွနျမာဂိမျးဖွဈတဲ့အတှကျ ဆော့ရလညျးလှယျတဲ့အပွငျ Play Storeမှာလညျး rating5နီးပါးလောကျရထားပါတယျ။ မွနျမာငှကွေေးနဲ့လညျး ဆော့ကစားလို့ရတဲ့အတှကျ အဆငျပွပေါတယျ။ ကိုယျတိုငျကစားကွညျ့လိုကျရငျတော့ ငယျငယျတုနျးကကစားခဲ့ရတဲ့ဖီလငျကိုပွနျရမှာ ကြိနျးသပေါတယျ။ အရငျကလို ဆော့ဖို့လူမရမကစုစရာလညျးမလို တနျးကစားရုံပဲဆိုတော့ အခုပဲ အောကျကလငျ့ချမှာ ဒေါငျးလုပျရယူရငျး အေးခမျြးတဲ့ စနတေနင်ျဂနှလေေးကို အနားယူနိုငျကွပါစေ.
ဆယ်လ်ဖီကင်မရာအတွက် notch ပါကြောင်း သေချာပြသသွားတဲ့ Xiaomi Mi Mix 2s